Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka oo ka soo laabtay Turkiga “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Xubnaha Guddiga Madaxa Banaan ee doorashooyinka Soomaaliya oo kamid ahaa korjoogayaasha doorashadii baarlamaaniga ahaa ee ka dhacay dalka Turkiga oo uu ku guuleestaya Xisbiga uu hogaamiyo Madaxweynaha talada haya ee dalka Turkiga Rajab dayib ordogan ayaa dalka dib ugu soo laabtay .
Guddiga Doorashooyinka ayaa intii ay joogeen Dalka Turkiga waxa ay waxbadan ka kororsadeen hanaanka dooroashooyinka maadaama doorasho dadka codkooda ay ka dhiibanayen ay ka dhacday Dalkaasi.
Guddoomiyaha Gudiga Madaxa Banaan ee dooraashooyinka Qaranka Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yareey) oo Guddiga Hogaaminaysay ayaa warbaahinta Qaranka u sheegtay inay wax badan ka soo kororsadeen doorashadii ka dhacday dalka Turkiga, isla markaana ay guddigooda diyaar u yihiin inay ku dabaqi doonaan howlahooda.
Xaliima Yareey waxa ay sheegtay inay lasoo kulmeen Guddiga Doorashooyinka Dalka Turkiga oo ay hashiis ku wada gaareen arrimo ay kamid tahay inay tababaro siiyaan xubnaha iyo howlwadeenada guddiga Madaxa banaan ee doorashooyinka.Qaranka.
Safarka Guddiga Madaxa banaan ee Doorashooyinka Soomaaliya ay ku tageen dalka Turkiga si ay goobjoog uga nqodaan doorashadii Baarlamanaiga aheyd ee ka dhacday Turkiga ayaa waxa kahoreeyay safar kale oo Guddigu ay ku tageen Dalkqa Tanzania iyagoo qeyb ka ahaa Korjoogayaasha Doorashadii Madaxtinimo ee ka dhacday Tanzania waxaana ujeedka safaradaasi uu ahaa aqoon kororsi ku saabsan hanaanka doorashooyinka.
Baarlamaanka oo ka hadlay Hindise sharciyeedka Iibka iyo qandaraasyada Qaranka